Callcenter igbu onwe | Martech Zone
Tuesday, January 15, 2008 Monday, July 11, 2016 Douglas Karr
Na Satọde, anyị na-arụ ọrụ na ebe a na-akpọ oku na otu n'ime ndị ahịa anyị. Enwere m ọhụụ ahụ, na-eche na ọ gaghị aga nke ọma. Ifu m ziri ezi.
Ọ bụ ezie na anyị nwere ngwa anyị zuru ezu na ihe onwunwe anyị na-anọdụ nkịtị maka ọnwa, onye na-akpọ oku emetụghị ihe ọ bụla. Anyị nwere ngosi ma ọ bụ naanị onye nrụpụta ha gosipụtara. Onye ahịa ahụ kpọrọ oku ahụ wee jụọ ihe achọrọ iji kwadebe. Anyị kpọrọ onye na-akpọ oku ka ọ hụ ma ha dị njikere. Oge ọ bụla ndị ọrụ na-akpọ oku gwara anyị na ha chọrọ izu ole na ole.
Mgbe enyere gị oge na akụrụngwa, were ha.
Abọchị ole na ole tupu anyị adị ndụ, ha chọrọ mgbanwe na ngwa anyị ga-eji slam na mmepụta. Otu ụbọchị tupu anyị gaa ibi ndụ, ha nwalere ma anyị chọpụtara nsogbu na slam. Anyị doziri ha n’ehihie.
N’anya onye ahịa anyị, n’ezie, akụkụ abụọ ahụ gbakọrọ. Ebumnuche ahụ bụ ebe ha na-akpọ + sọftụwia anyị. On Saturday anyị ulo oru a ụbọchị ole na ole mbubreyo - nke a bụ mgbe ezigbo fun malitere. Nzaghachi ozugbo na etiti ahụ bụ mkparị, enweghị ọrụ na nwayọ - sitere n'aka ndị ahịa, ọ bụghị anyị.
Ozugbo ahụ, anyị kpọrọ ụlọ ọrụ ahụ nzukọ nzukọ nkewa, unyi wee malite ịgba. E leghaara ọnwa ndị na-asọ anya mgbe ha rịọchara mgbe arịrịọ maka mmelite, na-elekwasị anya site na oku oku bụ na ụdị ntinye ego anaghị arụ ọrụ. Ha na-ana $ x / oku - mana ebe ọ bụ na oku a were ogologo oge, ego ga-efu ha. Ha mere ka amaghị ihe dị na olu ahụ e buru n'amụma, mee mkpesa banyere ịdị mgbagwoju anya nke oku ahụ, ma kwuo maka mkpa na-enweghị isi nke ndị ahịa.
N'agbanyeghị nke ahụ, ha kwenyere na azụmahịa ahụ, kwetara ụgwọ ahụ ma kwenye na usoro iheomume.
Emela mkpesa mgbe i kwuru na ị nwere ike igbu!
Ha kpebiri ịnwale ịtụba ihe niile n'okpuru ụgbọ ala ma chebe enweghị ike ha. Ọ na-agwụ ike ịnọ ọdụ site na oku ekwentị ebe ha boro ya ebubo na ihe niile dị n'okpuru anyanwụ. Ewezuga emeghị ihe n'eziokwu na-aga n'ihu banyere nsogbu ahụ (ọ bụghị nyochaa ọrụ n'ihu ma kwadebe ndị ọrụ ha nke ọma) ha họọrọ ụzọ dị ala. Nke kachasị njọ, ha kpebiri ikwupụta mkpesa ha n'ihu ọha mgbe ọdịda, kama tupu ịmalite. Nkwado ikpeazụ ha dị mfe, akụnụba agbakwunye. Ha anaghị eme ihe zuru ezu iji rite uru na oku ọ bụla.
Onye kpọrọ oku ahụ echefuru nke ahụ ego kwa oku abụghị ihe mgbaru ọsọ nke onye ahịa, revenue kwa oku bụ.
Ọ bụ a mara mma dị mfe ngwọta, ọ bụghị ya? Kachasị ịkwadebe ndị ọrụ gị, ọ ga - arụ ọrụ ha nke ọma ijikwa oku a. Ọ ka mma na ha na-ejikwa oku ahụ, ọ ga-aka mma na ha ga-ewute ndị ahịa ha, na-anọchite anya azụmaahịa ha na-arụchitere ya, ma yikarịrị ka ha ga-apụ ngwa ngwa. Ọ bụrụ na oku a were ogologo oge, onye ahịa ahụ nwere ike ị dị njikere ịkwụ ụgwọ ya ma ọ bụrụ na enwere ego akwụgoro. Thegwọ bụ nsogbu ụlọ ọrụ na-akpọ oku, ọgwụgwọ ya bụ ego ọzọ.
Anyị jụrụ ihe anyị nwere ike ime iji nyere aka. Otu nkwanye bụ itinye ụfọdụ ọrụ ndị ọzọ na ngwa ahụ. O di nwute, oge mmepe agafeela mgbe ngwa a na-abaghi ​​uru.
Taa, anyị gbanyụrụ ụlọ ọrụ oku iji nye ndị otu ahụ ohere ọzọ maka ọzụzụ. Ha ka na-ekwusi ike na inwekwu ego kwa oku. Ha kwesịrị ịghọta na ọ ga-aba uru ma ọ bụrụ na ị gosipụta na ị ga-ebu ụzọ rụọ ọrụ ahụ tupu ị rịọkwuo ego. Ndị ahịa ahụ na-enye ha ohere nke abụọ, echeghị m na ha ga-eji ya mee ihe nke ọma.
Anyị na-arụ ọrụ ugbua na ụzọ ndị ọzọ.
Tags: ebe okuọkpụkpọ okurevenue kwa oku
Ga-ahụ ya n'anya. Enweghị ike ịgwa gị ugboro ole ụdị ọnọdụ a dakwasịrị m. You na-anwa ma gbalịa inyere aka, ma na njedebe ha achọghị enyemaka ruo mgbe oge gafere ma gafere oge.
Ulo oku na-acho otutu ihe karie ma a bia na teknuzu. Usoro mmemme bụ naanị otu ihe dị mkpa…. :)
oke nke lancecorner.com